my kitchen my life: Vacation !!!
Pork Cutlet 400g
ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး ။ pork cutlet ကို barbecue grill လုပ်ထားတာပါ။ ထူးခြားတာက စိတ်ကြိုက် အသီးအရွက် ၊ sauce နဲ့ အာလူးကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားခြင်းပါပဲ။
mix vegs, sauteed spinach, Asparagus, Cheese tomato, Herb mushroom stew, Corn on Cob တို့ထဲက စိတ်ကြိုက်တမျိုး ရွေလို့ရမယ်။
နောက် sauce အနေနဲ့ Bearnaise , mustard black pepper, Mushrooms , lemon lime butter, Red wine shallot, Herb butter တို့ထဲက တမျိုး ။
အားလူး အနေနဲ့ ကတော့ french fries, Mash potato, Baked potato, Onion potato, Diablo beans , steamed rice တို့ထဲက နှစ်သက်ရာ တမျိုးကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ၁၈၀၀၀ ကျပ်လောက်ပေးရမယ်။ ကျနော်ဆိုရင် စားဘူး။း)
mix vegs : ရှင်းရှင်းလေပါ။ mix vegs တွေကို sauté ထိုးပေးရုံပါ။
sauteed spinach, Aspargaus : အတူတူ ပါပဲ။
Cheese tomato : tomato ကို slice လှီး အပေါ်က cheese ဖြူး bake ရပါမယ်။
Herb mushroom stew : မှိုကို stew လုပ် စိတ်ကြိုက် herb တမျိုးထည့်ပေရမယ်။
Corn on Cob : ပြောင်းဖူး ကို နွားနို့နဲ့ ပြုတ်ထားတာကို ခေါ်ပါတယ်။
bearnaise sauce ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
mastard black pepper : brown sauce + mastard + pepper
Mushroom sauce : saute' mushroom + brown sacue
Lemon lime butter : lemon + butter+ lime
Red Wine Shallot : shallot ရှယ်လော့ ဆိုတာ ကြက်သွန်နီ အသေးတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို sautee ထိုး ၊red wine ထည့် ကျို။ တ၀က် reduce ဖြစ်ရင် brown sauce လေး နဲနဲ ထည့် ။
Herb butter : lemon butter sauce + herb
အာလူး ကိုတော့ လေမရှည်တော့ပါဘူး။ Diablo beans : Diablo ဆိုတာ တောင်တလုံး ရဲ့ နာမည် ဖြစ်သလို ၊ Game တခုရဲ့ နာမည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် ၂ လ ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ဟင်းပွဲများ ၂ လ အတွင်း တင်ဖြစ်အုံးမည် မဟုတ်ပါ။ လာလည် သူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှ ညီ အကို မောင် နှမများ အား လုံး ကို နူတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by leo mark at 3:57 AM
ဝက်ဝံလေး March 24, 2011 at 5:48 AM
ညိုးတူဂျီးရယ် အဲဒါတွေလေ နာ့တီလုပ်စာတောင်အရှိဘူး သိလား ဟွင့်
ဝက်ပါးစပ် နှမ်းပက် ဖြစ်နေဘီ ဝူးးးးးးထွားးးးးးးးးထွားးးးးးးးးးးး
Han Kyi March 28, 2011 at 5:44 AM
အင်း နော် မ၀ရေစာလေး...
Alisa April 2, 2011 at 9:07 PM
This pork chop looks delicious.I followed you from the foodie blog roll and I'd love to guide Foodista readers to your site. I hope you could add this Pork chop widget at the end of this post so we could add you in our list of food bloggers who blogged about pork chop,Thanks!